Zhang: ‘Inter waxay u baahan tahay garoon cusub’ | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Zhang: ‘Inter waxay u baahan tahay garoon cusub’
Zhang: ‘Inter waxay u baahan tahay garoon cusub’
Posted by: Ahmed Haaddi June 12, 2021
Himilo – Madaxweynaha Inter Steven Zhang ayaa ku adkeysanaya in Nerazzurri ay sii ahaan doonto tartamayaal laakiin wuxuu ka digayaa in la dhiso garoon cusub inay tahay muhiimadda koowaad.
Ku guuleysiga Scudetto wuxuu ahaa dareen la yaab leh, waxaan garaacnay koox weyn oo naga soo horjeeday, oo ay ku jiraan kuwii ku guuleystay horyaal sagaalkii xilli ciyaareed ee hore. Ma qiyaasi kartid waxa aad dareento marka magaalada iyo taageerayaashu ay aad u faraxsan yihiin, gaar ahaan xilligan, ”Zhang ayaa u sheegay Sky Sport Italia.
“Ciyaaryahan kasta waa muhiim, xitaa kuwa ka baxsan garoonka. Lukaku waa mid qaas ah, kaliya ma ahan ciyaaryahan ahaan laakiin sidoo kale nin ahaan. Wuxuu leeyahay qalbi weyn qof walbana wuu la dhaqmaa. Waa dhif iyo naadir in la arko qof leh qalbi sidan u weyn. Waxaan xasuustaa in Conte uu ku adkeystay saxiixiisa labo sano ka hor, wuuna ku saxsanaa inuu naga dhigo inaan sameyno maalgashigan dhaqaale. Wuxuu ahaa ciyaariyahan sax ah ”.
“Ma aqaano haddii taariikhdu dib isu soo celin doonto, laakiin malaayiin qof ayaa xusuusan doona xilligan.”
Antonio Conte ayaa ka tagay kooxda kadib markii uu ku guulaystay koobkii ugu horeeyay ee Inter ee horyaalka Serie A muddo 11 sano ah isaga iyo kooxda ayaa ku kala aragti duwanaa horumarka kooxda iyo mashruuca muddada dheer.
“Wax badan ayaan maalgashi ku galnay kooxda, xaga lacagta iyo tamarta maskaxda, si aan ugu guuleysano koobkan. Naadi sida Inter ah waa inuu had iyo jeer noqdaa mid tartan ama wadada guusha ku socda. Koobkan wuxuu cadeynayaa inaan sameynay wax muhiim ah, ”ayuu yiri Zhang.
“Waa muhiim in la dhiso garoon cusub, qaab dhismeed casri ah oo naadiga ah kaasoo bixin kara adeegyo badan iyo khibrad kale taageerayaasha. La’aanteed, waxaan gadaal ka laadi doonnaa kooxaha kale ee horeyba u siiyay taageerayaasha qaab dhismeed ka wanaagsan.
Previous: Maqal- Bar Bandhigga Dhaqaalaha
Next: Maalinta caalamiga ah ee La-dagaalanka Addoonsiga Carruurta